Daadadka la xiriira iPhone Xs Max iyo Apple Watch Series 4 | Wararka IPhone
Xanta saacadaha gudahood Muhiimka ah: wararka ku saabsan iPhone Xs Max iyo Apple Watch Series 4
Waxaan nahay oo kaliya 8 saacadood markii aan ku laabanno tiyaatarka Steve Jobs si aan ula kulano mid ka mid ah diridda inta badan la wada sugayo inta lagu guda jiro sanadkan. Si dhab ah uma ogin waxa uu Apple noo sheegi doono, laakiin waxaan haynaa daadasho tilmaamaya meesha ay rabto inay ku rido tufaaxa weyn. Si kastaba ha noqotee, dhowr saacadood ka hor bilowga soo bandhigga, waxaa jira xog cusub oo xaday.
Markan waxaan ka hadlaynaa iPhone Xs Max oo culeyskiisu noqon karo midka ugu weyn taariikhda iPhone-ka, iyo Taxanaha Apple Watch 4 taas oo ka dhigi karta boodboodka 64-bit naqshad sida ku dhowaad dhammaan alaabooyinka Apple.
IPhone Xs Max ayaa culeys ka badan kii ka horreeyay yeelan doona
Warka waa kan. The iPhone Xs Max, IPhone-ka ugu weyn ee aan arki karno maanta wuxuu culeyskiisu noqon lahaa 208 garaam, marka loo barbardhigo 174 garaam oo loogu talagalay iPhone X. Laakiin yeynaan ka nixin. Waa wax caadi ah haddii aan tixgelinno in iPhone-kan uu yeelan karo shaashad ka weyn OLED marka loo eego tiirarka hore.
Intaa waxaa dheer, waa la hubiyey taas Xs Max wuxuu noqon lahaa asymmetrical. Xogta la daadiyay waxay muujineysaa in hal dhinac oo isku xira Hillaaca ay ku yaalliin afar god, halka dhinaca kale ay jiraan toddobo god. Isticmaalka daloolada kaladuwan lama garanayo, laakiin waa wax Apple waligeed sidan ku samayn tan iyo markii ay waligeed jeclayd isweydaarsiga iyo yaraanta Cupertino.
Waxaan ku sii wadaynaa wararka xanta ah. The Taxanaha Apple Watch 4, saacadda cusub ee aan maanta ku arki doonno soo bandhigidda, waxay ku salaysnaan kartaa 64-bit naqshadaha. Ilo badan lama yaabin macluumaadkan tan iyo sannado badan Apple waxay isku dayday inay jaangoyso naqshadaha dhammaan alaabteeda si loo kordhiyo iswaafajinta codsiyada, iyo faa'iidooyinka kale. Waan arki doonaa haddii sifeyntu ugu dambayn sax tahay.
Dhinaca kale, Sim-bayaasha SIM-yada qaar ka mid ah iphone-yada ayaa iyagana shalay la dusiyay iyagoo muujinaya Saddex midab taas oo noqon karta kuwa ay Apple ku suuq geynayso iPhone 6,1 inji ah. Waxaan leenahay seddex midab: buluug, casaan, iyo midab naxaas ah oo noqon kara midabka dahabka ee dad badani ka hadlayeen bilihii la soo dhaafay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Xanta saacadaha gudahood Muhiimka ah: wararka ku saabsan iPhone Xs Max iyo Apple Watch Series 4
Hees qoraa, dokumentari ku saabsan Ed Sheeran ayaa hadda laga heli karaa Apple Music